OpenEXPO Europe inotisvitsa iyo Yechitatu Shanduro yeiyo Open Awards | Linux Vakapindwa muropa
ari Vhura Mipiro ndiyo mibairo yakakosha kwazvo mune yakavhurika matekinoroji chikamu uye ikozvino inouya mune yayo III Edition yekutenda kuOpenEXPO Europe. Kuvhura kwe Kunyoresa maitiro Yakatanga munaKurume uye ikozvino ichavhara muna Kubvumbi 11 kuti irege kugamuchira kunyorera kweaya akavhurika-sosi uye emahara software mibairo. Chinangwa chichava chekuziva nekupa mubairo iwo akanakisa mapurojekiti uye zvirongwa munzvimbo ino, pamusoro pekubatsira kusimudzira nharaunda neruzhinji kuzivikanwa kwemakambani nemasangano ari kumashure kwavo.
Mune ino III Shanduro yeVhura Mubairo ichaunzwa 12 zvikamu mune ese makwikwi akaunzwa achasanganisirwa, achipa kuonekwa kwenyika uye kwepasi rose uye kuzivikanwa. Sezvandataura, musi wa11 nguva yekunyora inovhara uye musi waApril 18 mavhoti anozivikanwa anotanga kusarudza mapurojekiti aunofarira. Uye mhedzisiro yekupedzisira, senguva dzose, isu tichaona kuOpenExpo Europe 2018 fair iyo ichaitirwa muMadrid pakati paJune 6 na7, 2018.
Ikoko kuchabatanidzwa neanopfuura zviuru zvishanu zvehunhu hwechikamu FLOSS uye Yakavhurika Nyika Ehupfumi nerutsigiro rweYdral neUrban Chiitiko Kushambadzira icho gore rino chichaita sevatsigiri. Uye zvakare, pakati peVIP kutora chikamu kwakasimbiswa paMicrosoft, Red Hat, Arsys, OVH, Google Cloud kana Ackstorm, pamwe nevatauri vanobva kumasangano akasiyana akadai seNationalale Nederlanden, Telefónica, Ferrovial, Benetton, Grupo Pascual, Repsol, Kubhuka .com, IE Bhizinesi Chikoro, Air FRance-KLM, Iyo Apache Software Foundation, Nokia uye Cabify.
Nezve mibairo, isu tatoziva kare kuti kuchave nematanho gumi nemaviri akasiyana uye iwo achave akaumbwa mumapoka matatu makuru: Nyanzvi, Zvemagariro uye Zvakazarurwa. Mushure mechikamu chekutanga chekuvhota kwakakurumbira, ivo vachazopasa firita yejuri revanyanzvi kuti pakupedzisira vape vanokunda. Saka kubva kuLxA tinokukurudzira kuti uende kuti usarasikirwe nechero ruzivo, iwe unotoziva kuti iwe unogona kuenderera uchinyoresa kwemazuva mashoma ... Mamwe ruzivo paOpenExpo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Misangano / Zviitiko / Hurukuro » OpenEXPO Europe inotisvitsa iyo Yechitatu Shanduro yeakavhurwa mibairo
Gonesa kushandisa yako laptop bhatiri neTLP